Iodine - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Iodine)
2 Taariikhda Aaydhiinta
3 Atomka Aaydhiinta
4 Fal-galka Curiyeha Kale
5 Isticmaalka Aaydhiinta
Aaydhiin waa curiye Neef ah oo ka tirsan juffada Neefaha Halogenka. Aaydhiinta iyo isku dhisyada eey ka midka tahay waxaa inta ugu badan loo isticmaalaa Nafaqo ahaan, iyo warshadaha oo ka sameeysta Acetic Acid.
Aaydhiin (Ingiriis: Iodine) calaamad I waa curiye kimiko ah oo tiroda atomkiisu tahay konton-iyo-sadex. Aaydhiin waa curiye Neef ah oo ka tirsan juffada Neefaha Halogenka. Aaydhiinta iyo isku dhisyada eey ka midka tahay waxaa inta ugu badan loo isticmaalaa Nafaqo ahaan, iyo warshadaha oo ka sameeysta Acetic Acid. Sidoo kale, maadaama atamka Aaydhiin aad u sareeyo isla markaana suntu ku yartahay ayaa curiyahan waxuu ka mid yahay isku-dhisyada Raajoda (x-ray compounds).
Fal-galka Curiyeha Kale
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aaydhiin&oldid=131167"